बच्चालाई ज्वरो आउँदा के गर्ने, के नगर्ने? भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता काम – Life Nepali
बच्चालाई ज्वरो आउँदा के गर्ने, के नगर्ने? भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता काम
शिशुलाई ज्वरो आउँदा अभिभावक पनि शारिरिक र मानसिक रुपमा पीडित हुन्छन्। तर ज्वरो संक्रमणबिरुद्ध जुध्ने शरिरको आफ्नै तरिका हो। कतिपय अवस्थामा ज्वरो एक भाइरल संक्रमण हो जुन आफैं बिस्तारै निको हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि बच्चालाई उपचार र हेरचाहको आवश्यकता छैन। शिशुलाई उच्च ज्वरो आउँदा निम्न विषयमा बिचार पुर्याउनुपर्छ। एन्टिबायोटिक दिन हतार नगर्नुहोस्। हो कतिपय अवस्थामा १०१, १०२, १०३ डिग्री ज्वरो आएका बालबालिकालाई पनि एन्टिबायोटिक आवश्यकता पर्दैन। सामान्य प्यारासिटामोल सिरप खुवाएर पनि ज्वरो घटाउन सकिन्छ। स्मरणीय होस् ब्याक्टेरियाको संक्रमणले ज्वरो आएको चिकित्सकले पहिचान गरेपछि मात्र एन्टिबायोटिक दिइन्छ।
बच्चाको खानेकुरामा प्रशस्त सागसब्जी (प्रोबायोटिक डाइट) समावेश गर्नुहोस्। यसले पाचन पक्रियामा सहयोग गर्नुका साथै प्रतिरोध क्षमतालाई सुर्धाछ। शरिरको तापक्रम घटाउन मन तातो पानी वा चिसो पानीमा नरम लुगा भिजाएर टाउको र पैतलामा राखिदिनुहोस्। तापक्रम बढ्ने वित्तिकै यो प्रक्रियालाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। बच्चाले पिसाब गरेको छ छैन भन्ने तर्फ पनि ख्याल गर्नुहोस्। ज्वरो आउदा बच्चाले पाँच छ घन्टासम्म पनि पिसाब फेरेको छैन भने उसलाई डिहाइड्रेसन भएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ग्लुकोज पानी चढाउनुपर्ने हुन्छ।
Previous पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम
Next बाबुराम भट्टराईकि श्रीमती हिसिला यमी मोटरसाइकल दु*र्घटनामा परेर घा*इते , यस्तो छ अबस्था !
5 days ago kamal
9 hours ago kamal